शिलापत्र संवाददाता दार्चुला, २८ साउन
हिउँकी हिमाञ्चल पानीकी छाया ।
सुनकी भौरणी फोडी मान्तालोक आयाँ ।।
कै कि छ पुत्र ? कै कि छ जाया ?
इन्दैका पुत्र, मण्डवीकी जाया ।
यसरी भूमिराज देवताको यस धर्तीमा आगमन भएको यो गीतबाट प्रस्ट हुन्छ र जात्राको कहानी पनि जोडिन्छ । भूमिराज देवताका १६ वटी बहिनी थिए, जसलाई १६ भगवतीका रुपमा चिनिन्छ । यी बहिनीमा सबैभन्दा जेठी दुर्गादेवी थिइन् भने सुर्मा कान्छी थिइन् । सुर्मा देवीलाई छिपिली (चोखो) देवीका रुपमा मानिन्छ ।
महादेव देवताका सात थिए रे । ‘सातै भाइ महालिंग (महादेव) दानवैले खायाँ, एकोलो महालिंग ओलान डोलान माल मुनि लाग्याँ ।
यसको अर्थ महादेवका ६ वटा भाइ दानवले खाइदिएपछि घुम्दै फिर्दै महादेव मालकी थली (पूर्णागिरी)तिर लागे । महादेव र भूमिराजको भेट पिपलको बोट भएको चौतारीमा हुन्छ । दुवै अपरिचित थिए । चौतारीमा बसेको बेलामा उनीहरूबीच भनाभन भएछ । हुँदा हुँदै परिचय हुन्छ । महादेवले भूमिराजलाई कहाँ जाने भनेर सोधे पछि जवाफमा भूमिराजले आफू ज्वाइँ खोज्न हिँडेको बताउँछन् ।
यस्तै, भूमिराजले महादेवलाई सोधेपछि महादेव कन्या खोज्न हिँडेको भन्छन् । जवाफ सुनेपछि भूमिराज महादेवलाई जुवा खेल्ने प्रस्ताव गर्छन् । भूमिराजले जुवा हारे १६ बहिनीको विवाह महादेवसँग गरिदने र महादेवले जुवा हारे भूमिराजको बाख्रा चराइदिने बाजी राखेर जुवा खेलेछन् । भूमिराजले जुवा हारेपछि सर्तअनुसार सोह्रै बहिनीको महादेवसँग विवाह गरिदिए । दुर्गादेवी भूमिराजभन्दा जेठी भएकी हुनाले भूमिराज महादेवलाई भिनाजु भन्छन् ।
किंवदन्तीअनुसार राउद बोहरा र बाउद बोहरा दुई भाइ थिए । राउद ठेकरेका बाजे थिए भने बाउद बोहराका । उनीहरू हालको बझाड जिल्लाको घोगाडा भन्ने ठाउँमा बस्थे । त्यो बेला आँगनमा बिस्कुन (अनाज) सुकाउने चलन रहेछ । यसरी आँगनमा सुकाएको बिस्कुनलाई जंगली जनावर थार आएर दिनदिनै खाँदो रहेछ । सधैं यस्तै भएपछि एक दिन बज्यैले सहन नसकेर बाजेलाई भनिछन्, ‘तमरो झकुलो पागडो हमी देउ, हमरो गुन्यु चोलो तमी लैझाउ ।’
त्यो बेला लोग्ने मानिस झकुलो, पागडो (एक प्रकारको पहिरन) लगाउने गर्थे । त्यस्तो कुरा सुनेपछि दुवै जना बाजे मिलेर थारलाई लखेटेछन् । गर्भवती थार जलजला भन्ने ठाउँमा लडेपछि गर्भ तुहिएछ । यसरी धौलापुरको जन्म भएको थियो । सुर्माभवानीले थारको रूप धारणा गरेर गएकी थिइन् भन्ने मान्यता अहिले पनि रहिआएको छ । सुर्माको छोरा धौलापुर तुहिएर जन्मेको हुनाले धौलापुरलाई अतुयानु पनि भनिन्छ ।
महादेवका १६ वटा श्रीमती र एक निजेरी नामकी कमारी थिइन् । राक्षस कमारी निजेरीका पुत्र डाडाबाग थिए । सुर्माले थारको रूप धारणा गरेको बेलामा जन्माएका धौलापुरलाई छोडेर आएकी थिइन् । बच्चा छोडेर आए पनि पछि पिउला भनेर सुर्माले दूध छोडेर आइछन् । त्यो दूध डाडाबागले पिएको हुनाले राक्षस पुत्र डाडाबाग पनि देवता बनेको विश्वास गरिन्छ ।
भवानी सुर्माको सरोवर यात्रा
किंवदन्तीअनुसार महादेवलाई कुष्ठ रोग लागेछ । रोगको उपचारका लागि विभिन्न प्रकारको औषधि प्रयोग गरिएको थियो । लसुन पिसेर लगाउँदा रोग निको हुने सुनेपछि दुर्गाले सुर्मालाई लगेर लसुन पिस्न लगाइछिन् । दुर्गाले ओखलमा लसुन राखी मुसलले पिस्न सुरु गरिछन् । लसुन उछिट्टिएर बाहिर गएछ । लसुन बटारेर ओखलमा राख्न दुर्गाले सुर्मालाई भनिछन् । सुर्माले रुमालले नाक छोपेर विपरीत दिशा फर्केर लसुन बटारेर ओखलमा राख्न थालिछन् । यस्तो गरेको देखेपछि दुर्गाले रिसाउँदै भनिन्, ‘ततिकी छिपीली बैना, हिउँशंकर झान’ (त्यति चोखो भए यो ठाउँ छोडेर हिमालतिर जाउ) ।
दुर्गाको यस्तो वचन सुनेपछि सुर्माले भनिन्, ‘हिउँशंकर झाउलो भनी मनमाई गुमान’ (यो ठाउँ छोडी हिमालतिर जाने विचार मेरो पनि थियो) ।
उति बेला सुर्मादेवीका सम्पूर्ण परिवार बझाड जिल्लाको साविकको सुर्मा गाविसमा बस्थे । दुर्गाको वचन सुनेपछि सुर्मा हिमालतिर जान लागिन् । सुर्मा गएपछि निजेरी पनि उनको पछि लागिन् ।
किंवदन्तीअनुसार सुर्माले खुट्टामा पाउला (जुत्ता) र निजेरीले दोचा (भाडको रेशाले बनाएको) लगाएकी थिइन् । यसरी अघि अघि सुर्मा र पछि पछि निजेरी हिमालयतिर लागे । सुर्माले धेरै ठाउँमा आफू बस्ने ताल बनाउन कोसिस गरेकी थिइन् तर ताल बनाएर भागबन्डा नगर्दै निजेरी पुग्थिन् । राक्षसनीले छोएपछि सुर्मा नबसी अगाडि बढ्थिन् । धेरै ठाउँमा कोसिस गर्दा असफल भएपछि सुर्माले निजेरीसँग पाउला साटेर दोचा लगाइन् ।
दोचा नचिप्लिने र पाउला चिप्लने हुनाले निजेरीले सुर्मालाई भेट्टाउन सकिनन् र हालको सुर्मा सरोवर ताल बनाई भागबन्डा गरेपछि मात्र निजेरी पुगिन् । सुर्मा सरोवरको एउटै तालमा स्पष्ट दुई रंग छन् । नीलो रंग सुर्माको भाग र कालो रंग निजेरी भाग अहिले पनि प्रस्ट देख्न सकिन्छ । यसरी सुर्माको यो उच्च हिमाली तालमा बसाइँ सरेको थियो भन्ने भनाइ छ ।
सुर्मा भवानीको जात्रा
सुर्मा भवानी जात्रा अपिहिमाल गाउँपालिका–३ को क्षेत्ती र घाजिर गाउँमा मनाइन्छ । श्रावणको स्नानदान औंसीदेखि जात्रा सुरु हुन्छ । यो औंसीलाई मान्य औंसी भनिन्छ । बालो वीरेहरूले यसै दिनदेखि छुट्टिएर बस्ने चलन अझै छ । वास्तविक जात्राचाहिँ औंसीको एघाराैं दिन अथवा शुक्ल एकादशीबाट सुरु हुन्छ । सुर्मा जात्राको सम्पूर्ण व्यवस्थापन क्षेत्ती र घाजिरका बासिन्दाले मिलाउनुपर्ने चलन रहिआएको छ । यो जात्रा खास गरी तीर्थालुका लागि अति महत्त्वपूर्ण रूपमा लिइन्छ ।
जात्राका भक्तजनलाई विभिन्न वर्गमा विभाजित गरिएको हुन्छ । जात्राका मूल आयोजक क्षेत्ती र घाजिरकालाई क्रमशः उवादेशी (माथिल्लो बासिन्दा) र उनादेशी (तल्लो बासिन्दा) भनिन्छ । रोकाया र कार्की खण्डेश्वरीभित्रकै बासिन्दा भए पनि उनीहरूको इष्टकुल देवता फरक भएकोले जत्तोर (आमन्त्रित अतिथि) भन्छन् । खण्डेश्वरीभन्दा बाहिर घर भएका र पछि बसाइँ सरेर खण्डेश्वरी आएका भक्तजनलाई बाइदेशी (बाहिरको बासिन्दा) भनिन्छ । प्रत्येक तेस्रो वर्षमा ठूलो जात्रा मनाउने चलन छ । ठूलो जात्रामा सुर्मा सरोवरको दर्शन गर्न र वीरे जाने चलन रहेकोले भक्तजनहरू ठूलो जात्रामा बढी आउँछन् । सुर्मा सरोवरको कुण्डमा स्नान र दान गर्न पाउने हुनाले ठूलो जात्राको विशेष महत्त्व छ ।
सुर्मा सरोवरको दर्शन गर्न जाने भक्तजनले आंैसीदेखि व्रत बस्नुपर्छ । यहाँको चलनअनुसार यसै दिनदेखि कुकुर, महिला, हतियार र बिरालो छुनुहुँदैन । हरेक दिन बिहान स्नान गरेर शंख बजाई सुर्माको नाम लिनुपर्छ । मासु, अन्डा, लसुन र प्याज खानुहुँदैन र बेलुकीको खाना मात्र खानुपर्छ । तर, दूध, दही र फलफूल भने खान पाइन्छ ।
जात्राको पहिलो दिन
मान्य औंसीको १० औं दिन वास्तविक जात्रा सुरु हुन्छ । यो दिनलाई रतेडी भनिन्छ । जत्तोर र बाइदेशीले घाजिरबाट भएर मात्र जान पाउने नियम छ । यो दिन जत्तोर र बाइदेशीलाई उनादेशीले ढाको (देवताको बाजा) बजाई स्वागत गरेर भित्र्याउँछन् । उनीहरूलाई स्वागत गरेर सुर्मा मन्दिरमा पूजापाठ गरिन्छ र पूजा समापनपछि जत्तोर र बाइदेशीलाई घर घरमा बोलाई पुरी र तरकारी खुवाउने चलन छ ।
उवादेशी, उनादेशी र जत्तोरहरूमध्येबाट जो जो पहिलोपटक सुर्मा सरोवरको दर्शन गर्न जान्छन्, तिनीहरूलाई बालो वीरे भनिन्छ । दोस्रो र तेस्रो पटक जानेलाई बुढो वीरे भनिन्छ । बाइदेशीमध्येबाट दर्शन गर्न जाने सबैलाई वीरे भनिन्छ ।
वीरेको छुट्टै पहिचान हुन्छ । रतेडीको दिन मालिमा या लित्थी भेल भन्ने ठाउँबाट देउली (एक प्रकारको निगालो)को लट्ठी काटी ल्याउनुपर्छ । यो लट्ठीलाई लाकुडी लौडो (वीरे लाठी) भनिन्छ । लट्ठीको आकार दर्जाअनुसार अलग अलग हुन्छ । मुख्य मुला (जात्राको रेखदेख गर्ने व्यक्ति)लाई सात हात लामो, सहायक मुलालाई ६ हात लामो र अरू वीरेलाई पाँच हात लामो लट्ठी दिइन्छ । रतेडीको दिन घाजिर र क्षेत्ती दुवैतिर मन्दिरमा गई पूजाआजा गर्ने चलन छ । दियो जलाएर ढाको बजाएर झाँक्री काप्छन् र जात्रा सफलताको कामना गर्छन् । पूजापाठ सकिएपछि बूढापाकाहरू मन्दिरभित्र भाडीखेल (पुरानो गीत) गाएर मनोरञ्जन गर्छन् भने युवायुवती मन्दिर बाहिर देउडा खेलेर रात बिताउँछन् ।
यो दिनलाई देवी क्षेत्ती पुर्याउने दिनका रुपमा लिइन्छ । किनकि, यो दिन घाजिरबाट सम्पूर्ण भक्तजन वीरेहरूसहित क्षेत्ती जान्छन् । उनादेशीहरू ढाको बजाएर चाहाई (पुरानो स्थानीय नाच) खेल्दै बाइदेशी र जत्तोरहरू लिएर क्षेत्ती जान्छन् । सुरुमा निसान (झन्डा) र त्यसपछि क्रमशः झाँक्री, ढाके, मुला, वीरेहरू र भक्तजनहरू लाइन मिलाएर जान्छन् । देवीले दोचा लगाएर गएकीले जुत्ता लगाउन बन्देज गरिएको छ । भक्तजनहरूले घाजिरको पारि सिद्धनाथ भवानी प्राविको गेटबाट जुत्ता हातमा समातेर गई जुत्ता घरमा थन्काउनुपर्छ । यसको साथै छाता ओढ्न पनि निषेध गरिएको छ ।
घाजिरबाट गएको जात्रालाई क्षेत्तीमा भव्य स्वागत गरिन्छ । क्षेत्तीको काना ढुढु भन्ने ठाउँमा दुवैतिरको जात्राको भेट हुन्छ । मन्दिरमा धामीहरू काप्छन् । बीचमा एउटा रेखा हुन्छ । त्यो रेखाको एकातिर क्षेत्तीका र अर्कोतिर घाजिरका भक्तजनहरू हुन्छन् । महिलाहरू रेखाको वारिपारि देउडा गीतमा गन्जा खेल्छन् । खासगरी क्षेत्तीतिर उनादेशीका छोरीहरू र घाजिरतिर उवादेशीका छोरीहरू यहाँनेर गन्जा खेल्छन् । गीत गाउँदै महिलाहरूले रेखालाई पार गरेपछि मात्र जात्रा भेट भएको मानिन्छ । यो रेखा पार गर्न निकै जतन गर्छन् । घाजिरको धौलापुरको झाँक्री क्षेत्तीको मुख्य मुलाको काँधमा चढी प्रसन्न मुद्रामा क्षेत्ती जान्छ । जात्रा क्षेत्ती भित्रिसकेपछि घरघरमा बोलाएर प्रसादका रूपमा पुरी र तरकारी खुवाउने चलन छ । यो दिन पनि मन्दिरभित्र भाडीखेल र बाहिर देउडा खेलेर मनोरञ्जन गर्छन् ।
यो दिन वीरेहरू र अन्य दर्शनार्थी सुर्मा सरोवर जान्छन् । वीरेहरू पछ्यौरीको गादो (पहिरन) लगाएर महिलाका रूपमा जान्छन् । किंवदन्तीअनुसार खुट्टामा दोचा, शरीरमा पछ्यौरी र टाउकोमा झोप (महिलाको पहिरन) लगाई देवी सरोवर गएकीले सोही रूप धारण गरी जाने चलन छ । हिन्दु संस्कारअनुसार बाइदेशीबाहेकका वीरेहरूको व्रतबन्ध गरिन्छ । जौ र चामलको पिठोमा मह मिसाई बनाइएको प्रसाद बनाएर लिने गरिन्छ । यो दिन निकै मार्मिक हुन्छ । किनभने स्थानीय चलनअनुसार आमाले खाना खुवाएर र प्रसाद तयार गरिदिनुपर्छ ।
बुबाले छोरोलाई कपडा पहिराएर संयुक्त रूपमा बिदाइ गर्ने चलन छ । आमाबुबा जीवित हुनेहरू निकै खुसी देखिन्छन् भने आमाबुबा गुमाएकाहरू निकै भावुक हुन्छन् । वीरे जाने दाजुभाइलाई दिदीबहिनीहरू आशीर्वाद दिन आएका हुन्छन्, जसले गर्दा अविभावक गुमाएका भाइबहिनीको यो बिदाइको क्षण अत्यन्त कारुणिक हुन्छ । आफुहरू टुहुरा भएको महसुस यो दिन गर्न सकिन्छ । यसरी वीरेहरू मुला र झाँक्रीसहित सरोवरतिर जान्छन् ।
यो दिनलाई उबोझानी (माथि जाने दिन) भनिन्छ । सरोवर जाने बेला बालो र बूढो वीरेहरूको अलग लाइन बनाएर हिँड्ने गरिन्छ । बाटोमा दैत्यहरू बसेका हुनाले बालो वीरेहरूले आफ्नो टाउकोको झोप फुकालेर यताउति हेर्न पाउँदैनन् । बाटोभरि देवीको नाम लिएर उचेडा (भजन) गाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ । लगभग ४९०१ मिटरसम्मको उचाइ भएका डाँडा काट्दै बेलुकी बास बस्न वीरे ओडार पुग्छन् ।
यो दिन सुर्मा सरोवरको दर्शन गरिने दिनका रूपमा परिचित छ । सरोवर पुगेपछि पहिला लाकुडी लौडाको ज्वार गर्ने चलन छ । त्यसपछि परम्पराअनुसार स्नान, दान र श्राद्ध गरिन्छ ।सबै कार्य सम्पन्न गरिसकेपछि सरोवरको जल र गंगामाटी प्रसाद लिएर बेलुकी बास बस्न वीरे ओडार आउँछन् ।
यो दिन वीरेहरू क्षेत्ती फर्कन्छन् । पहिले पहिले वीरेहरू सिधै क्षेत्ती फर्कन्थे । आजभोलि बिरफट्टामा वालो वीरेहरूको वीरे दौड हुन्छ । जत्तोर र बाइदेशीको हेरचाह र अन्य विशेष कामका लागि मुला हुन्छन् । किंवदन्तीअनुसार एक समयमा सुज्या वैरे र मुस्या वैरे दुईजना मुला रहेछन् । दुवैजना निकै पाइक (बलवान) थिए । बिरफट्टामा दौडौं भनेर दौडे र दुवै जना बराबरी समयमा पुगे । त्यसै पालादेखि वीरे दौडाउने चलन चलिआएको हो । यसरी दौडाउँदा निश्चित स्थानमा जो व्यक्ति पहिला पुग्थ्यो, त्यो विजय भएको मान्ने चलन छ ।
वीरे दौडपछि सबै क्षेत्ती फर्कन्छन् । बाटोमा फुलाभाडी भन्ने ठाउँबाट बरम कोइला टिपेर ल्याउनुपर्छ । माला साट्ने बगरमा पुगेपछि प्रत्येकले आफ्ना लागि आफैं माला बनाउँछन् । लाकुडी लौडाको टुप्पोमा ऊनको धागोमा फूल उनेर बाँधिन्छ । यो बगरदेखि क्षेत्ती फर्कंदा बालो वीरेहरू दौड्दा पहिलो या दोस्रो भएको आधारमा लाइन लागेर आउँछन् ।
वीरे क्षेत्ती पुग्ने दिनलाई उनअत्थी (तल आउने) को दिन भनिन्छ । वीरेहरूलाई ढाको बजाएर चाहाइ खेलेर स्वागत गर्दै घर घरमा भित्र्याउँछन् । वीरेहरूलाई देवीका रुपमा मानिन्छ । उवादेशीका वीरेहरू यो दिन घर परिवारसँग जात्रामा सहभागी हुन्छन् भने अरू वीरेहरू स्याउजे मन्दिरमा बस्छन् । उनादेशी, जत्तोर र बायदेशी भक्तजनहरूलाई यो दिन पनि क्षेत्तीमा घर घरमा बोलाएर पुरी र तरकारी खुवाउने गरिन्छ ।
यो दिनलाई भवानी घाजिर सुर्मा मन्दिरमा पुगाउने दिनको रुपमा मानिन्छ । क्षेत्तीबाट वीरेहरू र अरू भक्तजनहरू ढाको र चाहाई खेल्दै घाजिर जान्छन् । यो दिन दोसंो दिनको जस्तै घाजिरमा भेट हुन्छ । यो दिन क्षेत्तीको धौलापुरको धामी घाजिरको मुलाको काँधमा चढेर मन्दिर जान्छ । यसरी देवीलाई मन्दिरमा भित्र्याउँछन् । जात्रा भित्रेपछि उवादेशी, जत्तोर र बाइदेशीलाई घरघरमा बोलाई उनादेशीले पुरी र तरकारी खुवाउँछन् ।
यो दिन बेलुकी घाजिरमा बोका काटेर दैत्यहरूलाई बलि चढाउने चलन छ । उमेरअनुसार भाडीखेल र देउडा गीत खेलेर राति मनोरञ्जन गर्छन् । घाजिरका लागि यो जात्राको अन्तिम दिन हो ।
सुर्मा भवानीको जात्रा समाप्त भएको भोलिपल्ट क्षेत्तीमा कालीदेवीको मन्दिरमा रगत बलि दिने चलन छ । उवादेशीका सबैभन्दा जेठो छोरा या छोरीलाई कालीदेवीको मन्दिरमा बलि चढाउँथे । बलिदिने क्रममा नै एकपटक एउटी केटीलाई बलि दिन लाग्दा ती केटीले मेरो रगतबाट मेरो कपडा भिज्न नदिनु भनेर मुलालाई अनुरोध गरिछन् रे । यो शब्द सुन्दा मुलाको मनमा दया लागेपछि केटीको सट्टामा बाख्राको बलि चढाएछन् । यसरी त्यसै पालादेखि मानिसको बलि नचढाई बाख्रा काटेर बलि दिने चलन चलिआएको भनाइ छ । यो दिनलाई जेठो छोराको छाया विवाहका पनि रूपमा मनाउने गरिन्छ ।
यसै दिन बेलुकी क्षेत्तीमा बोकालाई गाउँको चारैतिर घुमाएर चौबाटोमा लगेर बलि चढाउँछन् । यसरी जात्राको समापन हुन्छ ।
त्यसको भोलिपल्ट सबै जना आफ्नो घर फर्किन्छन् । वीरेहरू गंगामाटीको प्रसाद बाँड्न आफ्ना नातेदारको घरमा जान्छन् । वीरेलाई देवीका रूपमा स्वागत गरेर मीठो मीठो खाना खुवाइन्छ । यसरी जात्रा समापन हुन्छ ।
तस्बिर साैजन्यः हेमन्त बोहोरा
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन २९, २०७६, ००:०५:००